🥇 ▷ Nokia waxay daabacdaa jadwalka taariikhda jaangoynta Android 10 ✅
Nokia waxay daabacdaa jadwalka taariikhda jaangoynta Android 10
Dhowr saacadood ka hor, Android 10 ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay inuu yahay nooca cusub ee nidaamka hawlgalka. Google ayaa sheegay in ay ku salaaman yihiin magacyada macmacaanka, iyaga oo galaya waji cusub oo arrintan la xiriira nidaamka ay ku shaqeeyaan. La socoshada bandhiggan, Nokia waa shirkadda ugu horreysa ee xaqiijiso goorta ay cusboonaysiin doonaan telefoonnadiina nooca cusub ee nidaamka.
Nokia waa astaan ​​u taagan soo cusbooneysiinteeda cusboonaysiinteeda, waana kan ugu horreeya ee kudaabici doona noocyada cusub ee nidaamka hawlgalka taleefannadooda. Shirkadda ayaa xaqiijisay hadda marka Android 10 uu ku imaan doono aaladooda si rasmi ah. Marka isticmaalayaashu way yaqaanaan goorta ay sugi karaan.
Sida caadiga, Waxay noqon doontaa dhamaadka sare ee sumadda tan ugu horreysa ee helitaanka Android 10. Shirkadda Nokia 9 PureView, 8.1 iyo 7.1 ayaa noqonaysa kuwa ugu horreeya ee galaangal u leh, kaasoo kiiskooda noqon doona dabayaaqada sanadkan. Horeba sanadka dambe ayaa gaari doona moodello badan oo shirkada ah. Kalandarka oo dhan ayaa laga arki karaa sawirkan.
Sida caadiga, safkeeda oo dhami way heli doonaan. Tani waa tafaasiil oo shaki la’aan ka dhigaysa in shirkaddu bannaanka uga soo baxeyso arrimaha cusboonaysiinta. Tan iyo xitaa moodeeladaada ugu fudud ayaa marin u heli doona Android 10 sanad gudihiis Wax ay sumado yar yari ku faani karaan.
Sidaa darteed, haddii aad leedahay telefoonka Nokia, waad ogtahay goorta aad filan karto Android 10 inuu isla isla yimaado. Sumadda ayaa waliba sida caadiga ah la kulanta taariikhaha si aad u wanaagsan, marka laga reebo dhacdooyinka aan la fileynin. Marka waa jadwalka taariikhda in maskaxda lagu hayo, kaas oo markaa gaari doona taleefannada.
Hadda oo Android 10 yahay mid rasmi ah Oo annagana waxbadan ayaan ka ognahay, magacyada kale ayaa la socon doona raad raacyada Nokia. Sidaa darteed, toddobaadyadaani waxay soo bandhigi doonaan taariikhaha taleefannada ugu horreeya ee suuqa ay marin u heli doonaan nooca cusub ee nidaamka hawlgalka. Ma ahan inay qaadato waqti dheer in la ogaado jadwalka taariikhda kale ee magacyada kale.